Dirir: Booqasho Sisi ku Yimaado Atobiya, Waxay Furaysaa Iskaashi Wayn – Rasaasa News
Dirir: Booqasho Sisi ku Yimaado Atobiya, Waxay Furaysaa Iskaashi Wayn
Jun 23, 2014 Dirir: Booqasho Sisi ku Yimaado Atobiya, Waxay Furaysaa Iskaashi Wayn
Jijiga, June 23, 2014 – Danajiraha Atobiya u jooga Qaahira Maxamuud Dirir, ayaa yidhi “booqashada la filayo in uu ku yimaado Atobiya madaxwayne Cabdul Fataax Al-Sisi, waxay keenaysaa iskaashi wayn oo dhexmara labada dal.” Kulanka madaxda labada dal ee Atobiya iyo Masar waxay keeni xidhiidh dhab ah iyo isku xidhnaanta dabiiciga ah ee biyaha wabiga Nile.
Dirir oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in xidhiidhka xoogan ee ka dhaxeeya Israa,iil iyo Atobiya uuna ahayn mid laggaga horjeedo wadamada Carabta, Dan-jire Dirir ayaa waraysiga toos u siinayey TV lagu waraystay.
Danjire Dirir, ayaa cadeeyey in uu jiro khilaaf cusub oo soo kala dhexgalay labada dal, in kasta oo xidhiidh wanaagsan taariikhi ah uu hore u jiray iyo isku xidhnaan dhinaca diinta ah ee labada shacab.
Dirir, wuxuu ugu baaqay madaxda labada dal in ay xoojiyaan xidhiidhka u dhaxeeya labada dal, iyaga oo aan eegayn kaliya khilaafka biyaha wabiga Nile hada jira.
Atoobiya ayaa ka shaqaysay ku soo laabashada Masar ururka midowga Afrika, ayuu yidhi Dirir. Wafti balaadhan oo ka socda Atobiya oo ay ku jiraan siyaasiyiin caan ah, ayaa si deg deg ah ku imanaya Qaahira, sida uu sheegay Maxamuud Dirir.
Wasiirka Arimaha dibada ee Atobiya Tedros Adhanom, ayaa Khamiistii hore sheegay in mudo labo todobaad gudahooda uu booqasho ku iman doono Atobiya madaxwaynaha Masar Sisi, isaga oo la kulmi doona R/wasare Hailemariam Desalegn iyo Madaxwayne.
Khilaafka Atobiya iyo Masar ee biyaha Nile, ayaa todobaadkan dhexdiisa cirka isku shareeray, ka dib kolkii ay Atobiya wada xaajood kala gashay arintan dalka Israa,iil. Waxaa kale oo ay arintani fogaysay dalka Sudan oo hore raali uga ahaa biyo xidheenka ay Atobiya ka dhisayso wabiga Nile
Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamud: dadka Somaliyeed meel ay dagaanba waxaan kula dardaarmayaa in ay u diyaar garoobaan xuska maalinta June 26, 1960.
ONLF, oo Weerar Kadisa ku Dishay Qaar ka Mida Masuuliyiintii Maamulka Dhagaxbuur.